Inqubomgomo yobumfihlo – SL Raw Virgin Hair LLC.
ISIGABA 1 - SENZANI NGOLWAZI LAKHO?
Uma uthenga okuthile esitolo sethu, njengengxenye yenqubo yokuthenga nokudayisa, siqoqa ulwazi lomuntu siqu osinikeza lona njengegama lakho, ikheli, nekheli le-imeyili.
Lapho uphequlula isitolo sethu, siphinde sithole ngokuzenzakalelayo ikheli lephrothokholi ye-inthanethi yekhompyutha yakho ukuze usinikeze ulwazi olusisiza ukuthi sifunde ngesiphequluli sakho nohlelo lokusebenza.
Ukuthengisa nge-imeyili (uma kusebenza): Ngemvume yakho, singase sikuthumelele ama-imeyili mayelana nesitolo sethu, imikhiqizo emisha nezinye izibuyekezo.
ISIGABA 2 - IMVUME
Uyithola kanjani imvume yami?
Uma usihlinzeka ngolwazi lomuntu siqu ukuze siqedele umsebenzi, uqinisekise ikhadi lakho lesikweletu, Identification, ufake i-oda, uhlele ukulethwa noma ubuyisele okuthengiwe, sisho ukuthi uyavuma ukuthi sikuqoqe futhi sikusebenzisele lokho okuthengiwe. isizathu kuphela.
Uma sikucela ulwazi lwakho lomuntu siqu ngesizathu sesibili, njengokumaketha, sizokucela ngokuqondile imvume yakho oyishilo, noma sikunikeze ithuba lokuthi cha.
Ngiyihoxisa kanjani imvume yami?
Uma ngemva kokungena, ushintsha umqondo wakho, ungahoxisa imvume yakho ukuze sixhumane nawe, ukuze siqhubeke siqoqwa, sisetshenziswe noma sidalule ulwazi lwakho, nganoma isiphi isikhathi, ngokusithinta ku- sales@ slrawvirginhair.com noma usithumele i-imeyili ku-:
ISIGABA 3 - UKUDlulwa
Singase sidalule ulwazi lwakho lomuntu siqu uma umthetho ufuneka ukuthi senze kanjalo noma uma wephula Imigomo yethu Yesevisi.
ISIGABA 4 - THENGA
Isitolo sethu siphethwe kwa-Shopify Inc. Basinika inkundla ye-e-commerce eku-inthanethi esivumela ukuthi sikudayisele imikhiqizo namasevisi ethu.
Idatha yakho igcinwa ngokugcinwa kwedatha yakwaShopify, imininingo egciniwe kanye nohlelo lokusebenza olujwayelekile lwe-Shopify. Bagcina idatha yakho kuseva evikelekile ngemuva kwe-firewall.
Uma ukhetha isango lokukhokha eliqondile ukuze uqedele ukuthenga kwakho, i-Shopify igcina idatha yekhadi lakho lesikweletu. Ibethelwe nge-Payment Card Industry Data Standard Standard (PCI-DSS). Idatha yakho yokuthenga igcinwa kuphela uma kunesidingo ukuze uqedele ukuthenga kwakho. Ngemuva kokuthi sekuqediwe, imininingwane yakho yokuthenga iyasuswa.
Wonke amasango okukhokha okuqondile athobela izindinganiso ezibekwe yi-PCI-DSS njengoba ilawulwa yi-PCI Security Standards Council, okuwumzamo ohlanganyelwe wemikhiqizo efana ne-Visa, Mastercard, American Express kanye ne-Discover.
Izidingo ze-PCI-DSS zisiza ukuqinisekisa ukuphathwa okuphephile kolwazi lwekhadi lesikweletu yisitolo sethu nabahlinzeki baso besevisi.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, ungase ufune nokufunda Imigomo Yesevisi yakwa-Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) noma Isitatimende Sobumfihlo (https://www.shopify.com/legal/privacy) .
ISIGABA SESI-5 - IZINKONZO ZOKUSEBENZA KWESITHATHU
Ngokujwayelekile, abahlinzeki bezinkampani zangaphandle abasetshenziswa yithi bazoqoqa kuphela, basebenzise futhi badalule ulwazi lwakho ngokwezinga elidingekayo ukuze babavumele ukuthi benze izinsizakalo abasinikeza zona.
Kodwa-ke, abahlinzeki besevisi abathile bezinkampani zangaphandle, njengamasango okukhokha kanye nabanye abacubungula bemisebenzi yokukhokha, banezinqubomgomo zabo zobumfihlo maqondana nolwazi okudingeka sibanikeze lona mayelana nemisebenzi yakho ehlobene nokuthenga.
Kulaba bahlinzeki, sincoma ukuthi ufunde izinqubomgomo zabo zobumfihlo ukuze uqonde indlela ulwazi lwakho lomuntu siqu oluzophathwa ngayo yilaba bahlinzeki.
Ikakhulukazi, khumbula ukuthi abahlinzeki abathile bangase babekwe endaweni noma babe nezinsiza ezitholakala endaweni ehlukile kunawe noma thina. Ngakho-ke uma ukhetha ukuqhubeka nomsebenzi obandakanya izinsizakalo zomhlinzeki wesevisi wenkampani yangaphandle, ulwazi lwakho lungase lube ngaphansi kwemithetho yezindawo lapho lowo mnikezeli wesevisi noma izindawo zakhe zitholakala khona.
Njengesibonelo, uma utholakala e-Canada futhi umsebenzi wakho ucutshungulwa ngesango lokukhokha elitholakala e-United States, khona-ke ulwazi lwakho lomuntu siqu olusetshenziswe ekuqedeni lokho kuthenga lungase ludalulwe ngaphansi komthetho wase-United States, okuhlanganisa ne-Patriot. Act
Uma usushiya iwebhusayithi yesitolo sethu noma uqondiswa kabusha kuwebhusayithi yenkampani yangaphandle noma isicelo, awusabuswa Le Nqubomgomo Yobumfihlo noma Imigomo Yesevisi Yewebhusayithi yethu.
Uma uchofoza izixhumanisi esitolo sethu, zingase zikuqondise kude nesayithi yethu. Asinacala ngezinqubo zobumfihlo zamanye amasayithi futhi sikukhuthaza ukuthi ufunde izitatimende zabo zobumfihlo.
ISIGABA 6 - UKUVIKELA
Ukuze sivikele ulwazi lwakho lomuntu siqu, sithatha izinyathelo zokuphepha ezifanele futhi silandela izinqubo ezingcono kakhulu zomkhakha ukuze siqiniseke ukuthi alulahleki ngokungafanele, alusetshenziswanga kahle, alufinyelelwanga, ludalulwe, alushintshiwe noma alucekelwa phansi.
Uma usihlinzeka ngolwazi lwekhadi lakho lesikweletu, imininingwane ibethelwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-socket layer technology (SSL) futhi igcinwe ngokubhala ngemfihlo kwe-AES-256. Nakuba ingekho indlela yokudlulisela nge-inthanethi noma isitoreji se-elekthronikhi evikeleke ngo-100%, silandela zonke izimfuneko ze-PCI-DSS futhi sisebenzise izindinganiso zomkhakha ezengeziwe ezamukelwa ngokuvamile.
ISIGABA 7 - AMAKHUKI
Nalu uhlu lwamakhukhi esiwasebenzisayo. Siwafake ohlwini lapha ukuze ukwazi ukukhetha ukuthi uyafuna ukuphuma kumakhukhi noma cha.
_session_id, ithokheni eyingqayizivele, isikhathi, Ivumela i-Shopify ukuthi igcine ulwazi mayelana neseshini yakho (i-referrer, ikhasi lokubikezela, njll).
_shopify_visit, akukho datha ebanjiwe, Iphikelela imizuzu engama-30 kusukela ekuvakasheni kokugcina, Isetshenziswa isilandeleli sezibalo sangaphakathi somhlinzeki wewebhusayithi yethu ukurekhoda inani lokuvakasha
_shopify_uniq, akukho datha ebanjiwe, kuphelelwa yisikhathi phakathi kwamabili (okuhlobene nesivakashi) ngosuku olulandelayo, Ibala inombolo yokuvakashelwa esitolo yikhasimende elilodwa.
inqola, ithokheni ehlukile, iphikelela amaviki angu-2, Igcina ulwazi olumayelana nokuqukethwe kwekalishi lakho.
_secure_session_id, ithokheni eyingqayizivele, iseshini
storefront_digest, ithokheni eyingqayizivele, okungapheli Uma isitolo sinephasiwedi, lokhu kusetshenziselwa ukunquma ukuthi isivakashi samanje sinokufinyelela yini.
ISIGABA 8 - Iminyaka YeMVUME
Ngokusebenzisa lesi sizindalwazi, umela ukuthi uneminyaka okungenani yobudala yabantu abaningi esifundeni sakho noma esifundazweni ohlala kuso, noma ukuthi uneminyaka yobudala eningi esifundeni sakho noma esifundazweni ohlala kuso futhi usinike imvume yakho vumela noma yibaphi abancikile bakho abancane ukuthi basebenzise le sayithi.
ISIGABA 9 - IZINGUQUKO KULE NQUBOMGOMO YOMFIHLO
Sigodla ilungelo lokuguqula le nqubomgomo yobumfihlo noma nini, ngakho sicela uyibuyekeze njalo. Izinguquko nezincazelo zizoqala ukusebenza ngokushesha lapho zithunyelwa kuwebhusayithi. Uma senza izinguquko ezibonakalayo kule nqubomgomo, sizokwazisa lapha ukuthi ibuyekeziwe, ukuze wazi ukuthi yiluphi ulwazi esiluqoqayo, silusebenzisa kanjani, futhi ngaphansi kwaziphi izimo, uma zikhona, sisebenzisa futhi/noma sidalule. yona.
Uma isitolo sethu sitholwa noma sihlanganiswa nenye inkampani, imininingwane yakho ingase idluliselwe kubanikazi abasha ukuze siqhubeke sikudayisele imikhiqizo.
IMIBUZO NEMINININGWANE YOKUXHUMANA
Uma ungathanda: ukufinyelela, ukulungisa, ukuchibiyela noma ukususa noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo ngawe, ukubhalisa isikhalazo, noma umane ufuna ulwazi olwengeziwe thintana neSikhulu Esibhekele Ukuthobela Ubumfihlo bethu ku- sales@slrawvirginhair.com noma ngeposi ku-
SL Izinwele Ezingavuthiwe
[Re: Isikhulu Esithobela Ubumfihlo]